26ka bishan oo la filayo in fasax la siiyo mudanayaasha baarlamaanka ee ku sugan Baydhabo si loo fuliyo sharciga xukunka deg deg ah, Weerar aroornimadii saakay lala beegsaday dekedda Xamar iyo taageerayaasha dowladda federaalka ah oo maanta ku shiraya Hotel Kaah ee magaalada Muqdisho. Ruunkinet 05/02/07
Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa ku waramaya in 26ka bishan fasax la siin doono xildhibaanada baarlamaanka ee ku sugan Baydhabo.
Fasaxan oo ay ku maqnaan doonaan muddo 2 bilood ah ayaa la sheegay in loola dan leeyahay in lagu socodsiiyo howgallada xukunka deg deg ah ee ay dowladda federaalka la damacsantahay degaannada Koofurnta Soomaaliya gaar ahaan gobollada Banaadir, Shabeellada Hoose iyo Jubbooyinka.
Warka ayaa intaasi ku daraya in dowladda federaalka ah ee madaxweyne Cabdullahi Yuusuf ay dooneyso in ay hubka ka dhigito dadka ku nool gobolladaasi.
Dhanka kale, waxaa 4tii subaxnimo ee saakay lagu weeraray dekedda weyn ee magaalada Muqdisho hub kala duwan.
Hubkan oo u badnaa Baasuuko iyo hubka kale oo qoriga loo yaqaan Low oo garabka la saarto sida ay ku waramayaan dad goob joogeyaal ah ayaa la sheegay in weerarkaasi u geytay dhibaatoohin dekedda in kastoo aan weli la sheegin inta ay la egtahay dhibaatadaasi.
Weerarada lagu qaadaya dekedda iyo goobo kale oo ay fadhiyaan ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiyaanka ah ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sii kordhaya muddooyinkan dambe.
Dhanka kale, waxaa saakay ku shiray Hotel Kaah ee magaalada Muqdisho taageerayaasha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Shirkan ayaa loog hadlayay sidii wax looga qaban lahaa ammaan xumida ka jirta gobolka Banaadir.